I-WIFI ye-Wireless ye-Mini engenazingcingo Ihlola ikhamera yePinhole efihliweyo, ukurekhoda kwe-70hrs, i-100hrs imile (SPY032) | Izisombululo ze-OMG
I-WIFI engenantambo ye-WIFI eyayihlola ikhamera yePinhole efihliweyo, i-35-70hrs ukurekhoda, i-100hrs imile (SPY032)
Ikhamera efihliweyo yeyona mini ihlabathi ikhamera encinci, ihambelana nazo zonke iintlobo zezixhobo eziphathekayo.
Umgcini wevidiyo ofihliweyo: Ncinci kakhulu kunye noLuxweight, Designed Compact, Nje iqhosha; Inkxaso yekhadi ye-TF ukuya kwi-32GB (ayifakiwe); Ukurekhoda inkxaso kunye nokushaja ngexesha elinye, inkxaso yokurekhoda kwevidiyo.
Ikhamera ye-Wi-Fi, lula ukusebenzisa: (Okubalulekileyo: Nceda ufaka amakhadi akho e-TF ngaphambi kokuba uyisebenzise !!!) Le Ikhamera efihliweyo ine-WiFi: Isisombululo esitsha seSiSilicon chip senza uxhumano oluzinzileyo lweWIFI. Unxibelelwano lwengingqi kunye ne-Remote linxibelelana, i-WiFi ibanga malunga ne-10m-20m, ukulawula iphasiwedi ukukhusela ubumfihlo bakho. Iingcebiso: ingqamaniso yokuxhunywa olude kukuqinisekisa ukuba ifowuni inokufikelela kwi-intanethi: I-WIFI okanye inethiwekhi yomnxeba.
Ukufumanisa ukuhamba: Xa kuqhutywe isinyathelo, ikhamera iya kuqala ukurekhoda ngokuzenzekelayo. Yaye kunye neRekodi ye-Real-time yokurekhoda, le gadget encinane iya kubhala ngokuthembeka isenzo sakho sotwendwe esingahambelwanga ngexesha langempela kunye nekhowudi nganye yefayile ye-1 imizuzu.Sekela ukurekhoda kwevidiyo yangempela.
Eziyimfuneko: Isixazululo seVidiyo: I-HD ye-HD 1280x720P, Thatha ividiyo ecacileyo ephakamileyo kunye nomgangatho wesithombe. Nge-10,000 mAh lithiyure ibhetri, ukurekhoda kwevidiyo okuqhubekayo i-400 imizuzu. Ukuxhuma kwifowuni / tablet / PC ngqo ngokuphenya isistim se-WiFi yekhamera. Ungabukela ividiyo kwikhamera ngexesha. Akukho mfuneko ye-WiFi router yokuthumela.
(1) Ukubeka esweni kunye neendawo zangaphakathi ezikhuselekileyo ezifana nezindlu zokulala, amafulethi, amagumbi omndeni, iindawo zokuhlala, iigaraji, izindwendwe kunye nezinye.
(2) Ikhamera yeNanny, isilongwe sesilwanyana okanye uqinisekise ukuba izalamane zakho ezikhulile zikhuselekile kwaye ziphilile.
(3) Ikhamera ikhusela ikhaya lakho ngokunqanda abenzi bamatyala.
Isisombululo esitsha esingenasiphelo se-Hisilicon chip singenakuphazamiseka, ukuxhamla kwi-WIFI.
Ibanga le-WiFi elifanelekileyo lekhamera li malunga ne-30m, ikuvumela ukuba ufake ikhamera yakho ngentando.
Isixazululo seVidiyo: I-HD ye-HD 1280x720P, Thatha ividiyo ecacileyo ephakamileyo kunye nomgangatho wesithombe
I-10,000 mAh ibhetri ye-built-in: ihlala irekhoda kwi-900 imizuzu.
I-MAX isekela kumakhadi e-32GB SD.
I-lens encinane kakhulu kunye nevolumu, ngoko unokukufihla lula ngaphandle kokuphawula. I-ofisi, uhambo, ivenkile, ikhaya elikhuselekileyo ekusebenziseni iindlela ezahlukeneyo (abantwana, izifuyo, i-babysitter, abantu abadala).
Ukurekhoda kweLoop kulungiswe ukuba kubhalwe ngaphezulu ifayili endala kunayo entsha.
Ukuqwalaselwa kwesigxina: Xa kuhamba ukuhamba, ikhamera iya kuqala ukurekhoda ngokuzenzekelayo.
Usuku olulungisiweyo kunye ne-watermark.
Imveliso ixhotyiswe nge-2.0 ukukhwela kwesikhokelo sokushaja, ukukhawuleza ngokukhawuleza, ukuchitha ixesha elifutshane.
Ngokusebenzisa amandla eselula, iplagi ukuhlawula.
Iingcebiso ezifudumeleyo: Ngenxa yokuba le ikhamera yenkinobho, nceda ungawucongi ikhefu kwaye uyikhusele.
Xhuma ikhamera: Ngomfanekiso wokujonga i-video yexesha langempela, ineendlela ze-2: enye ikwaseKhaya ngokujonga nge-WIFI. Olunye uluhlu olude lokubukela kude.
Inkqubo yokusebenza ye-APP elula, ulawulo olulula ngakumbi, olulungele ukusetyenziswa.
Isixazululo seVidiyo: I-HD ye-HD 1280x720P, Thatha ividiyo ecacileyo ephakamileyo kunye nomgangatho wesithombe.
Izindlela ezahlukahlukeneyo ezahlukeneyo zeqhosha leqhosha kwiimfuno zakho ezahlukahlukeneyo ngokusekelwe kwimeko enokukunika inketho yokugqoka ikhefu yekhamera eyahlukeneyo kwilenki yekhamera eyenza kube lula ukufihla nokuthwala.
inkxaso ukurekhoda nokuhlawula ngexesha elinye,
inkxaso yokurekhoda kwevidiyo,
inkxaso 32I-GB encinci ye-GB kwi-Max (Akufakiwe)
Inkxaso yeNgingqi kunye ne-Remote ukudibanisa, i-WiFi ibanga malunga ne-30m, Ulawulo lwephasiwedi ukukhusela ubumfihlo bakho.
amacebiso: Isiqendu soxhumo olude luqinisekisa ukuba ifowuni inokufikelela kwi-intanethi: I-WIFI okanye inethiwekhi yomnxeba.
Isombululo seVidiyo: Iyinyaniso ye-HD 1280x720P,
Ibhetri yeLithium: 10,000 mah
Ukurekhoda kwevidiyo eqhubekayo: ixhomekeke ku imizuzu 900.
Ukuxhuma kwifowuni / tablet / PC ngqo ngokuphenya isistim se-WiFi yekhamera. Ungabukela ividiyo kwikhamera ngexesha.
Akukho mfuneko ye-WiFi router yokuthumela.
4.7 x 2.4 x 3 intshi
I-SPY032 - I-WIFI iPholehole i-Spy Hidden Footage Footage
22346 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-50 Namhlanje